LGBTQ Izibonelelo zoosomashishini-i-OutBüro
Yonke into oyifunayo ukwenza ukuba i-resume yakho igqame, udliwanondlebe, uqhubele phambili nomsebenzi wakho, kwaye uzulazule kwihlabathi ledijithali kusetyenziswa imidiya yoluntu kunye nonxibelelwano lwedijithali.
Qiniseka ukuba ujoyina i-Out: Iqela le-BizOwners ngomxholo ongaphezulu, yabelana ngezinto ozifumanayo kwi-intanethi, uzibandakanya nabanye, fumana inkxaso kunye nokuxhasa abanye. Khangela onke amaqela ngendawo kunye namaqela ajolise kwimixholo anomdla. Nceda uqiniseke ukuba kwifayile yakho ye- Iprofayile ye-OutBüro ubonakalisile ukuba ungusomashishini. Oku kuya kunceda ekucwangciseni nasekuhambiseni amanqaku amatsha esiza, izibonelelo ezizodwa kunye nokunye okuninzi.
Ngaphandle: Abanini beBiz